John Wick(2014) John Wick(2014) JOHN WICK ဆိုတဲ့သူဟာ ကြေးစားလူသတ်သမားတစ်ယောက်.... ကြေးစားလူသတ်သမားလောကတင်မဟုတ်ဘူး...ရဲဘက်ကတောင် JOHN WICK ဆိုတဲ့သူကို ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့ပြောရမည်ထင်သည်.... လူသတ်လက်နက်ပေါင်းစုံနဲ့အပစ်အခတ်တွေ၊သွေးသံရဲရဲတွေနဲ့ လောကငရဲကြားကနေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအရင်းခံပြုပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကJOHN WICK ကိုနွေးထွေးတဲ့သီးခြားကမ္ဘာငယ်လေးဆီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်.. JOHN WICKကြီးအတွေ ပျော်စရာနေ့ရက်တွေပေါ့..သို့ပေမယ့် သူကြာကြာကံမကောင်းခဲ့ရှာဘူး.... JOHN WICK ရဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ကင်ဆင်ရောဂါနဲ့ဆုံးပါးသွားတယ်... တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်မနေပဲ သူမကိုယ်စား ဒီခွေးလေးကို ဂရုစိုက်ပါ၊ချစ်ပါလို့စာရေးခဲ့ရင် ခွေးလေးတစ်ကောင်ကို ထားခဲ့တယ်...ခြောက်ကပ်လုဆဲဆဲ JOHN WICK ရဲ့ ကမ္ဘာလေးထဲမှာ သူ့ရဲ့ခွေးလေးက နောက်ဆုံးလက်ကျန် အစွမ်းအဆမဲ့ သံယော်ဇဉ်အမျှင်တန်းလေးတစ်ခုပါပဲ... တစ်နေ့တော့ ရုရှားမာဖီးယား ဂိုဏ်းက လူငယ်သုံးဦးက John Wick စီးတဲ့ 69 Mustang ကြီးကို တွေ့သွားပြီး လိုချင်လို့ ၀င်ခိုးရာကနေ John ရဲ့ ခွေးလေးကို ပါသတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခွေးတော့ခွေးပါပဲ..ဒါပေမယ့် ဒီခွေးက JOHN WICK ရဲ့ခွေးဖြစ်နေတယ်.... အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဇာတ်လမ်းက သာမန် Revenge ဇာတ်ကားဖြစ်ပေမယ့် အက်ရှင် အရမ်းကောင်းသလို ဇာတ်ရှိန်အတက်အကျ မှန်တာကြောင့် ပရိတ်သတ် အနေနဲ့ လုံးဝမပျင်းရပါဘူး။ တစ်ကားလုံး စိတ်ဝင်စားဖို့ ...
IMDB: 6.1/10 7,979 votes
Big Hero6(2014) Big Hero6(2014) IMDb - 7.8/10______Rotten - 89% Won 1 Oscar. Another 16 wins & 58 nominations Walt Disney Animation ရဲ့ နောကျထပျ လူကွိုကျမြားလှတဲ့ animation ဇာတျကားလေးပါပဲ။ ဝငျငှအေကောငျးဆုံးဇာတျကားအဖွဈ ရပျတညျခဲ့တဲ့ ဇာတျကားဖွဈပွီး ပေးထားတဲ့ Message တှကေောငျးမှနျလှပပါတယျ။ Baymax ရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုအမှုလေးတှနေဲ့ ပုံစံတှကေို သဘောကမြိမှာ အမှနျဖွဈပွီး Baymax ရဲ့ လှုပျရှားပွုမှုပုံတှကေို ပငျဂှငျးပေါကျစလေးတှရေဲ့ အပွုအမှုကို ပုံစံတူယူပွီး ဖနျတီးထားတာပါ။ Walt Disney နဲ့အတူ Marvel Entertainment ကပါ ပူးပေါငျးရိုကျကူးထားတဲ့အတှကျ အစောပိုငျးထှကျခဲ့တဲ့ Walt Disney ဇတျကောငျတှနေဲ့ မတူကှာခွားလို့နပေါတယျ။ IMDB Ratings: 7.8/10 ရရှိထားပွီး ကွညျ့ဖို့လကျမလှတျသငျ့တဲ့ ဇာတျကားလေးတဈခုပါပဲ။ Thit San Khant မှ Encode ၍ တငျဆကျပေးထားပါတယျ
Timeline (2014) ဘ၀ မှာ အချစ်စစ်ထက် ပို တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာ မရှိလောက်ပါဘူး တစ်ချို့ကတော့ အချစ်စစ်က ကိုယ့်ဘေးနားရှိရက်နဲ့ ပျောက်နေကြတယ် တစ်ချို့ ကိုယ့်ကိုချစ်လာမလားလို့ စောင့်နေရင်း အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးကြရတယ် တစ်ချိုကကတော့ အချစ်စစ် နဲ့ ချစ်တာကို တန်ဖိုးမထားတက်ကြဘူး... ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ တန် ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ နယ်မြို့လေးကနေ မြို့ပေါ်ကို ကျောင်းလာတက်ခဲ့တယ် အမေတစ်ခု သားတစ်ခု ဘ၀ကနေ ကိုယ့်ဘာသာ မြို့ပေါ်မှာ ကျောင်းတက်ရတဲ့အခါ အလွဲလွဲ အချော်ချော်လေး တွေ စဖြစ်ရတယ်.. အဲ့ဒီ အလွဲအချော်တွေကို ထိန်းကွပ်ပေးမဲ့ ချစ်စရာ ကောင်မလေး တစ်ယောက် တန် ရဲ့ ဘ၀ ထဲကို စတင် ၀င်ရောက်လာခဲ့တယ်... သက္ကသိုလ်ရဲ့ ဖရက်ရှာဝဲလ်ကမ်း မှာ ဒီကောင်မလေးကို သူစတွေ့တာပေါ့... ဖြစ်ချင်တော့ ပထမဆုံးနေ့ မတိုင်ခင်က တန် တို့ သူငယ်ချင်းတွေ အမူးသောက်ပြီး မှောက်ကြတော့ ကျောင်းရဲ့ ကြိုဆိုပွဲကို နောက်ကျပြီး ရောက်သွားရာက စတာပဲ... သူတစ်ယောက်ထဲလား ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး ဂျွန်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးပါ ပါတယ်.. ဒီတော့ ၂ ယောက်တွဲ အပြစ်ပေးခံရတဲ့ ...
Kung Fu Jungle ( 2014 ) အမှန်အကန်ချတာကိုမှ ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီဇာတ်ကားကို bluray 5.1 CH နဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ရုပ်ရှင်အညွှန်းကတော့ mmmovieguide ကဖြစ်ပါတယ်.. Hahou Mo ဟာ သိုင်းပညာသင်ကြားပြသပေးနေတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီိး လူတစ်ယောက်ကို မတော်တဆသတ်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့် ထောင်ကျနေသူတစ်ယောက်ပါ။ တစ်ရက်တော့ ထောင်ထဲမှာ TV ကြည့်နေတုန်း လူတစ်ယောက် သတ်ခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကို ကြားလိုက်မိပါတော့တယ်။ သူဟာ ထိုလူသတ်မှုအကြောင်းကို သိပြီး ထိုအမှုကို စုံစမ်းနေတဲ့ စုံထောက် Luk Yuen-Sum ကို သူ ကူညီပေးမယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလျို့ဝှက်ချက်တွေပေါ်ပေါက်လာမလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါ အက်ရှင်သိုင်းကား ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဖိုက်တင်ခန်းတွေက ပိုပြီး ရန်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ တချို့အခန်းတွေတော့ အနည်းငယ်ရက်စက်တယ်လို့ထင်ရပြီး အခန်းအများစုကတော့ ကြည့်လို့အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒါရိုက်တာ Teddy Chan က အကောင်းဆုံး ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီး Ip Man ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှ Donnie Yen, Charlie Yeung, Baoqiang Wang တို့ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Lucy ( 2014 ) လူစီဟာ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ တိုင်ပေမြို့မှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ ရည်းစားက သူ့ကို လိမ်ခေါ်လာတာကြောင့် ကိုရီးယားက လူဆိုးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆီမှာ အဖမ်းခံရပါတယ်။ သူ့ရည်းစားလည်း အသတ်ခံရပြီး သူကတော့ CPH4 လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ကြွဆေးတစ်မျိုးကို သယ်ဆောင်ပေးဖို့ အကြပ်ကိုင်ခံရပါတယ်။ ဘယ်လို သယ်ဆောင်ပေးရမလဲဆိုတော့ သူ့ဗိုက်ကိုခွဲ၊ CPH4 အိတ်ကို ဗိုက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူလိုမျိုး ထည့်ပေးခံလိုက်ရသူ ၄ ဦးရှိပြီး မတူညီတဲ့ နေရာတွေဆီ ပို့ပေးရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို စောင့်ပေးရတဲ့ လူဆိုးတစ်ယောက်နဲ့ ပြဿနာတက်ပြီး ဗိုက်ကို အကန်ခံရတာကြောင့် CPH4 အိတ်ပေါက်သွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို CPH4 တွေ တိုက်ရိုက်ဝင်ကုန်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ဆာ ဆမ်မြူရယ် နော်မန်ဟာ သက်ရှိတွေရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောတွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုကို သုတေသနပြု စာတမ်းရေးသားနေသူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ သီအိုရီအရ လူသားတွေဟာ သူတို့ဦးနှောက်ရဲ့ ၁၀%ကိုသာ အသုံးပြုနေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၂၀%ကို အသုံးပြုနိုင်သူတွေဟာ လင်းပိုင်တွေဖြစ်ပြီး ဆိုနာလှိုင်းတွေကို အသုံးပြုရင်း တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် ဆက်သွယ်ကြကြောင်းလည်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ မေးခွန်းက ဒီ့ထက်ပို အသုံးပြုခဲ့ရင်၊ အဆုံးစွန်ဆုံး ၁၀၀% အသုံးပြုခဲ့ရင် ...
IMDB: 6.4/10 395,326 votes
A Hard Day ( 2014 ) A Hard Day (ကိုရီးယားအမည်-Take it to the End) ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လေးဟာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ မှ ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးထားတဲ့ မှုခင်းဇာတ်ကြောင်းအခြေခံ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းနဲ့ဒါရိုက်တာအဖြစ် Kim Seong-hun က ဖန်တီးရိုက်ကူးထားပြီးတော့ Lee Sun-kyun နဲ့Cho Jin-Woong တို့ကအဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ A Hard Day ရုပ်ရှင်ကားဟာ Cannes Film Festival ရဲ့ Directors’ Fortnight Sectionမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ရပါတယ်။ Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ May 18,2014 မှာပြသခဲ့ပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ May 29, 2014မှာပြသခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ လာဘ်စားအကျင့်ပျက် စုံထောက်ရဲတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့မိခင် မကြာသေးမီက ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် အရေးတကြီးနဲ့ လှိုဏ်ခေါင်းလမ်းတွေကနေ အမြန်ကားမောင်းလာပါတယ်။ သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဟာလည်း လာဘ်စားခြင်းကိစ္စအတွက်နဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ခံယူနေရပါတယ်။ ရဲဟာ လမ်းပေါ်မှာ သွားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကားနဲ့တိုက်မိသွားပြီးတော့ လူသတ်မိသွားပါတယ် ။သူဟာကြောက်ရွံ့ပြီး အလောင်းကို တိတ်တဆိတ်သယ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ? လူသတ်မှုကကောအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ပါမလား? ဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့လာရနိုင်မလဲ ဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် မှုခင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသား Lee Sun-kyun ...
IMDB: 7.2/10 7,952 votes
Deadly Virtues: Love. Honour. Obey. (2014) Sunday ညမှာ ကြည့်ဖို့ ထိတ်လန်းသည်းဖို ရုပ်ရှင်တစ်ကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဇာတ်​ကားထဲက အဓိကဇာတ်​ဆောင်​က အာရွန်​... ဆိုတော့ သူ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်​ သူက စိတ်​ဝေဒနာရှင်​တစ်​ယောက်​ ကြိုးချည်​နည်းတွေကို စနစ်​တကျသိထားပြီး အစွဲလမ်းကြီးတဲ့သူမျိုး ဇာတ်​လမ်းကို လင်​မယားနှစ်​ယောက်​ရဲ့အိမ်​ထဲဝင်​တဲ့ပုံစံနဲ့ အစပျိုးထားတယ်​ ယောက်ျားကိုကြိုးချည်​ပြီး သူ့မိန်းမနဲ့ Game တွေကစားတယ်​ သူမကြိုက်​တာ တစ်​ခုလုပ်​တိုင်း ယောက်ျားရဲ့ လက်​ချောင်းကို တစ်​ခါဖြတ်​တယ်​ ဒါပေမယ့်​ သူကထူးခြားတယ်​ လူသတ်​သမားမဟုတ်​ဘူး သူလိုချင်​တဲ့ ရက်​လေးအတွင်းမှာ သူနေစေချင်​သလိုနေပေးရင်​ သူကျေနပ်​ပြီ ဆိုသလိုမျိုးလူ သူက ကောင်​မလေးရဲ့နာမည်​ကိုလဲသိတယ်​ စကားလည်းပြောဖူးတယ်​ ဒါပေမယ့်​ ကောင်​မလေးကတော့ မသိဘူး ဒါဆို သူအိမ်​ကို ဘယ်​လိုဝင်​လာခဲ့တာလဲ နာမည်​ရော ဘယ်​လိုသိနေတာလဲ စကားပြောဖူးတယ်​ဆိုတာရော ဟုတ်​ရဲ့လား သူလုပ်​စေချင်​တဲ့ အရာတွေပြီသွားရင်​ လွှတ်​ပေးမှာလား ဘာဆက်​ဖြစ်​မှာလဲ ကျန်​တာ Down ကြည့်​ကြပါနော်​ ဇာတ်​ကားလေး ကြာချိန်​က ၈၇ မိနစ်​ ခန့်​ဖြစ်​ပြီး imdb rate 4.8 ရထားပါတယ်​ director ကတော့ Ate de Jong ပါတဲ့ အာရွန်​နေရာမှာတော့ Edward Akrout ကသရုပ်​ဆောင်​ထားပါတယ်​ ဇတ်လမ်းကို Munha က ဘာသာပြန်ပေးပြီး အညွှန်းကိုလဲ ကိုယ်တိုင်ရေးပေးထားပါတယ် (18+ အခန်းများ ပါဝင်သဖြင့် မိသားစုဖြင့် ကြည့်ရှု့ရန် မသင့်ပါ)
The Fatal Encounter (2014) ဒီကားလေးကတော့ကိုရီးယားနန်းတွင်းကားလေးပါ။ မင်းသား Hyun Bin ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကားလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိုဆောင်ပြည်နယ်ရဲ့၂၂ဆက်မြောက် ဂျောင်ဂျိုဘုရင်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကခမည်းတော်ဖြစ်သူ မျက်စိရှေ့မှောက်အဖိုးတော်ထံမှသေမိန့်ပေးခံရတာကိုမြင်ခဲ့ရသူပါ။ တိုင်းပြည်မှာပုန်ကန်သူတွေသစ္စာဖောက်တွေထကြွသောင်းကျန်းချိန်မှာ ထီးနန်းတက်ရတဲ့ကံဆိုးသူဘုရင်အဖြစ်လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ သူယုံကြည်တဲ့တစ်ဦးတည်းသောသူကတော့အစ်ကိုလိုသူငယ်ချင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ဂတ်ဆိုကုန်းကုန်းပါ။ အဖိုးတော်ရဲ့ဇနီးငယ်လေးဖြစ်တဲ့အဖွားတော်ဟာလည်းလုပ်ကြံမှုထဲပါဝင်ပတ်သက်နေသူပါ။ မယ်တော်ဖြစ်သူဟာလည်းသားတော်လေးကိုတတ်အားသရွေ့ကြိုးစားကာကွယ်ချင်သူ။ မင်းကြီးမသိခဲ့တဲ့ နောက်ကွယ်ကဇာတ်ကြောင်းတွေနဲ့လုပ်ကြံမှုတွေ တိုင်းပြည်ငြိမ်သက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မလားဆိုတာကတော့ နန်းတွင်းကားနှစ်သက်သူတွေလက်မလွတ်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ (ဇာတ်လမ်း အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးထားတာကတော့ Noe ဖြစ်ပီး Arkar Phyo မှ encode ပေးထားပါတယ်။) File Size : (1.33 GB) & (486MB) Quality : .1080p.BluRay Running Time :2hr 16min Format : Mp4 Genre : Action,Drama, Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Noe Encoded by Arkar Phyo (Yrfatt)
The Royal Tailor (2014) တော်ဝင်အပ်ချူပ်သမားဆိုတဲ့ The Royal Tailor ဇာတ်ကားကဂျိုဆွန်ခေတ်မှာ အရမ်းတော်တဲ့ အပ်ချုပ်သမား အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီး Park Shin-Hye ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကားကောင်းလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် အကျီဝတ်စုံတွေဆိုတာ တစ်သတ်မတ်တည်းရှိနေပြီးတော့ အတိုအရှည်အတိုင်းအတာတွေဆိုတာလဲ တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်တာကြောင့် မတော်တဲ့သူကမတော် ရှည်တဲ့သူကရှည် တိုတဲ့သူကတိုနဲ့အချိုးမကျနိုင်ခဲ့တာပါ ဒါကိုပြုပြင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ထင်ရှားလှတဲ့သူ့ရဲ့အရည်အချင်းကြောင့် မိဖုရားကနန်းတွင်းကိုခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ ဘုရင့်ရဲ့အရင်ကဝတ်ရုံတော်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဘဝဆိုတာရရနေ ရရစားနဲ့ သူသဘောကျတဲ့ပုံစံကိုပဲလုပ်ဆောင်ချင်ခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးဆိုတော့ အချိုးအကွေ့အပြောင်းအလဲကသိပ်တော့ မချိမြိန်လှပါဘူး။ နန်းတော်ရဲ့ပင်တိုင်အပ်ချုပ်ကြီးကလဲ သူ့နေရာကိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့သူကိုနေရာပျောက်မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေရော အချစ်ဇာတ်လမ်းသေးသေးလေးတွေပါရောပြွန်းပါဝင်နေတဲ့ဒီဇာတ်ကားကကြည့်ကောင်းလှပါတယ်။ အလှဆုံးကတော့ ပတ်ခ်ရှင်ဟေးပါပဲ မိဖုရားဆိုတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုသူ့ရဲ့ချစ်စရာမျက်နှာလေးနဲ့တကယ့်ကိုလိုက်ဖက်ညီအောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ ။ ပြီးတော့ ဒီတစ်ကားလုံးမှာဆိုရင် ပတ်ခ်ရှင်ဟေးရဲ့ပွဲတော်အတွက်ဝတ်စုံကတကယ့်ကိုအသက်ပါပဲ။ (ကပ်ပရှင်ကအသက်မဟုတ်တော့ဘူး ဒီတစ်ခါတော့ :-P) (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Chram ဖြစ်ပြီ Arkar Phyo မှ Encode ပေးထားပါတယ်) File Size : (1 GB) & (427MB) Quality : .1080p.BluRay Running Time :2hr 4min Format : Mp4 Genre : Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Chram Encoded by Arkar ...